>Kyaw Homes’s Poem
>Mar Mar Aye - 267
> ပင်လယ်ဖြတ်ကျော် ရိုဟင်ဂျာများသတင်း နိုင်ငံတကာက အာရုံစိုက်ဓာတ်ပုံသတင်းဇန်န၀ါရီ ၂၁၊ ၂၀၀၉ထိုင်းနိုင်ငံပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းသို့ လှေဖြင့် ဆိုက်ရောက်လာကြသော မြန်မာ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတို့မှ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေသူများ။ထိုင်းကြည်းတပ် ဗိုလ်မှူးကြီးက Koh Sai Baed ကျွန်းသို့ရောက်ရှိလာသော ၎င်းတို့အား သွားရောက် စစ်ဆေးပုံများကို မကြာသေးမီက Reuters သတင်းဌာက ရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေသူများမှာ အစ္စလမ်ဘာသာဝင် ရိုဟင်ဂျာများဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုင်းအာဏာပိုင်တို့က ၎င်းတို့အား ပင်လယ်တွင်းသို့ ပြန်လည်စေလွတ်ခဲ့ပြီးနောက် ရာနှင့်ချီ၍ ပျောက်ဆုံးခဲ့သည်ဟူသော သတင်းမှာ နိုင်ငံတကာထိပ်တန်းသတင်းတပုဒ် ဖြစ်နေသည်။ (photos: Reuters) No tags for this post. Related posts No related posts.
> ဦးတင်မောင်ဝင်း ကွယ်လွန်ခြင်း ၁၈ နှစ်ပြည့် တာရာဝေယံ ဇန်န၀ါရီ ၂၁၊ ၂၀၀၉ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခရမ်း ၂ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်မောင်ဝင်း (၁၉၄၀-၁၉၉၁) ကွယ်လွန်ခြင်း ၁၈ နှစ်ပြည့် ဆွမ်းကျွေးအလှူကို ဇန်န၀ါရီ ၁၈ နံနက်ပိုင်းက ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆွမ်းကျွေးအလှူကို ဦးတင်မောင်ဝင်းရဲ့ နေအိမ်ရှိရာ အမှတ် ၁၇၊ ဗိုလ်ဉာဏလမ်း၊ ဗိုလ်စိန်မှန် ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်မှာ ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သခင်အုန်းမြင့်၊ သခင်သိန်းမောင်၊ ဦးဝင်းတင်၊ ဦးအုန်းမောင်၊ ဦးမောင်မောင်ကြီး၊ မောင်ဝံသ၊ ဖျာပုံနီလုံဦး အစရှိတဲ့ နိုင်ငံရေး အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်များနဲ့ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဦးတင်မောင်ဝင်းဟာ ၁၉၅၇ – ၅၈ မှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် တက်ခဲ့ပြီး...
> နေအိမ်ခန်းအတွင်းက ဘာသာရေးဆုတောင်းပွဲများ တားမြစ်ခဲ့ မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၇ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၊ ၂၀၀၉ ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး နောက်ပိုင်းတွင် စစ်အစိုးရက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဘုန်းတော်ကြီးများ၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၊ တရားပွဲများကို ဖိနှိပ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သံဃာတော်များကိုလည်း သံဃာသပိတ်မှောက်ကံဆောင်မှုကို နှိမ်နှင်းရန် ဖမ်းဆီး ထောင်ချပြီး အချို့ကို ရဲဘက်စခန်းများအထိ ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသာမက အခြား ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့်များကိုပါ ကန့်သတ် ချုပ်ချယ်မှု ဆက်လက် တိုးပွားလာကြောင်း သတင်းများက ဆိုသည်။ ရန်ကုန် စည်ပင်သာယာနယ်နမိတ်အတွင်းရှိ လူနေအိမ်များ၊ တိုက်ခန်း အဆောက်အဦများအတွင်း မိမိကိုယ်ပိုင်အစီစဉ်ဖြင့် စုပေါင်းပြုလုပ်နေကြသော ဘာသာရေး ၀တ်ပြုဆုတောင်းမှုများကို အမြန်ရပ်တန့်ရန် ၊ ရန်ကုန်တိုင်း သာသနာရေးမှူး...
> မြန်မာ့အလင်း (ဦး) သန်းညွန့် ကွယ်လွန်ခြင်း တလပြည့် တာရာဝေယံ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၊ ၂၀၀၉ ၁၉၄၆ ဗမာပြည် သတင်းထောက်များအသင်း (BRA) ကို စတင်ထူထောင်ရာမှာ ပါဝင်ခဲ့သူတဦး ဖြစ်တဲ့ ၀ါရင့်သတင်းစာဆရာကြီး မြန်မာ့အလင်း သန်းညွန့် (၁၉၂၆ – ၂၀၀၈) ကွယ်လွန်ခဲ့တာ တလ ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ ဆရာ့အတွက် ကျန်ရစ်သူ မိသားစုများက ကွယ်လွန်ခြင်း တလပြည့် ဆွမ်းကျွေးအလှူကို အမှတ် ၅၂၊ က္ကုစ္ဆာသယလမ်း ပုသိမ်ညွန့်ရပ်ကွက်၊ တာမွေရှိ နေအိမ်မှာ ဇန်န၀ါရီ ၁၁ နံနက်ပိုင်းက ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သံဃာတော်များနဲ့ ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဧည့်ပရိသတ်တွေကို နေ့လည်စာနဲ့ တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ပါတယ်။ ဆရာ့ကို ချစ်ခင်လေးစားကြတဲ့ နိုင်ငံရေး၊ သတင်းစာ၊ အနုပညာ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ...
>2 Burmese fishermen talk about the escape
> သြစတေးလျနိုင်ငံ၊ ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းအစီအစဉ်တခုတွင် တွေ့ရသော မြန်မာပြည်သား ငါးဖမ်းလှေလုပ်သား ၂ ဦး။ (ဓာတ်ပုံ-ကေအေ၀ိုင်) ပင်လယ်အတွင်းမှ လွတ်မြောက်လာသူနှစ်ဦးနှင့် စကားပြောခြင်းSydney Morning Heraldဇန်န၀ါရီ ၂၀၊ ၂၀၀၉ ပင်လယ်အတွင်း ၂၅ ရက်ကြာ မျောပါနေခဲ့သော မြန်မာလူငယ် ၂ဦးက ၎င်းတို့၏ သေကံမရောက် သက်မပျောက်သည့် အတွေ့အကြုံအချို့ကို ရှင်းပြခဲ့သည်။ ထို ၂ ဦးမှာ ကိုကိုဦး (အသက် ၂၂ နှစ်)၊ သောင်းထိုက် (အသက် ၂၄ နှစ်) တို့ ဖြစ်သည်။ ကိုကိုဦးက “ပထမ ဆယ်ရက်က ဘာမှ စားစရာမရှိဘူး” ဟု Thursday Island ဆေးရုံတွင်ရှိနေစဉ် စကားပြန်မှတဆင့် ရှင်းပြသည်။ “နောက်တော့ ပင်လယ်ငှက် အကြီးကြီး...
> အိုဘားမား၏ရှေ့ရေး စံဇာဏီဘို ဟောကိန်းထုတ်ပြီAFP သတင်းဌာနဇန်န၀ါရီ ၂၀၊ ၂၀၀၉ သမ္မတအိုဘားမားသည် နောက်ထပ် သမ္မတသက်တမ်းတခု အရွေးခံရပြီး၊ ကြုံလာမည့် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုများမှလည်း လွတ်မြောက်ဦးမည်ဟု မြန်မာပြည်မှ ထိပ်သီး ဗေဒင်ပညာရှင်တဦးက ယမန်နေ့က ပြောကြားလိုက်သည်။ ဗေဒပညာရှင် စံဇာဏီဘိုက “အိုဘားမားက နောက်တခေါက်ကို အရွေးခံရဦးမယ်ဗျာ၊ သိဟ်ရာသီဖွားတွေက တခြားလူတွေကို ခေါင်းဆောင်လုပ်ဖို့ မွေးလာတာပဲ။ သူ့ဇာတာကိုကြည့်လိုက်၊ ဧကရာဇ်အမှတ်အသား တွေ့ရမယ်”ဟု ပြောလိုက်သည်။ ဆရာစံဇာဏီဘိုသည် ရန်ကုန်စီးတီးအက်ဖ်အမ်ရေဒီယိုမှတဆင့် နေ့စဉ်ဟောကိန်းများ ကြေညာနေသူဖြစ်သည်။ အိုဘားမား၏ မွေးနေ့ သြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့သည် “နံပတ်၎ နေ့မှာ မွေးဖွားတဲ့ အိုဘားမားရဲ့ ဦးဆောင်မှုအောက်မှာ နိုင်ငံက တိုးတက်လာမယ်”ဟု အဓိပ္ပာယ်ရကြောင်း ၎င်းက ရှင်းပြသည်။ သို့သော်လည်း နက္ခတာရာများကို ကြည့်ရှုတွက်ချက်ထားသော...
>Maung Yit – From Lincoln then Martin Luther King to Obama
> လင်ကွန်း၊ မာတင်လူသာကင်းနဲ့ အိုဘားမား မှသည် … မောင်ရစ် ဇန်န၀ါရီ ၂၀၊ ၂၀၀၉ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၄၀ (၁၉၆၈ ဧပြီ ၄) မှာ လူမည်း လူ့အခွင့်အရေးခေါင်းဆောင် “မာတင်လူသာကင်း ဂျုနီယာ” ကျဆုံးခဲ့တယ်။ သူ့မွေးနေ့ကို အမေရိကန်ရဲ့ အာဇာနည်နေ့တနေ့ အဖြစ်သတ်မှတ်တယ်။ ဇန်န၀ါရီ ၁၉။ နောက်တရက် – အနှစ် ၄၀ အကြာ – ဇန်န၀ါရီ ၂၀၊ ၂၀၀၉ မှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက လူမည်းတဦးကို ပထမဦးဆုံး သမ္မတကြီးတဦးအဖြစ် တခဲနက် ရွေးချယ်လိုက်တယ်။ သူ့နံမယ်က ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့ရဲ့ “အိုဘားမား” … ဂန္ဓီကို စံထားတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးခေါင်းဆောင် မာတင်လူသာကင်းရဲ့ မော်ကွန်းဝင်...
>fishermen survive month at sea in ice box
> လေယာဉ်ပေါ်မှ ရိုက်ကူးထားသော ဓာတ်ပုံတွင် ကယ်ဆယ်သူများကို ၀မ်းသာအားရ ဝှေ့ယမ်းအချက်ပြနေသူ နှစ်ဦးကို တွေ့ရသည်။ ငါးဖမ်းလှေများတွင် ပင်လယ်စာများသိုလှောင်လေ့ရှိသည့် အအေးခန်းသေတ္တာအတွင်း ၀င်ရောက်လိုက်ပါခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာ၂ဦး ပင်လယ်တွင် ၁လနီးပါး မျောပါခဲ့ ရိုက်တာသတင်းဌာန ဇန်န၀ါရီ ၂၀၊ ၂၀၀၉ မြန်မာငါးဖမ်းလုပ်သား၂ဦးသည် ၎င်းတို့၏ ငါးဖမ်းလှေ တိမ်းမှောက်ပြီးနောက် ပင်လယ်ထဲတွင် တလနီးပါးခန့် အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့သည်ဟု ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းများက ပြောပြသည်။ အဖုံးပွင့်ရေခဲသေတ္တာကြီးအတွင်း ၀င်ရောက်နေထိုင်ပြီး ငါးမန်းပေါများသော ပင်လယ်ထဲတွင် မျှောပါနေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ နှစ်ဦးစလုံး အသက် ၂၀ ကျော်အရွယ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ၎င်းတို့အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့် ၁၂ မီတာရှည်လျားသည့် ထိုင်း ငါးဖမ်းလှေ နစ်မြှုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ လှေပေါ်တွင် အခြား ၁၈ ဦးလည်း ပါဝင်ကြောင်း...
>Ottara Moon – The New Day of 21 Centuary
> ၂၁ ရာစုရဲ့ သမိုင်းသစ် ကင်မရာတွေအားလုံး ၀ါရှင်တန်ကို ချိန်ထားမယ့်နေ့ ဥတ္တရမွန်း ဇန်န၀ါရီ ၁၉ ရက် အင်္ဂါနေ့ ၂၀ရက်မှာ အုိုဘားမား ကျမ်းကျိမ်သစ္စာဆိုပြီး အမေရိကန်သမ္မတအဖြစ် လက်ခံယူတော့မဲ့ သမိုင်းဝင်အခန်းအနားကို သန်းနဲ့ချီမဲ့လူတွေ ၀ါရှင်တန်မှာ စုရုံးရောက်ရှိမှာ ဖြစ်သလို အခြားသန်းပေါင်းများစွာသော လူများလည်း အလုပ်ခွင်တွေရဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားစက် အနားမှာ ရောက်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ “ဒါဟာ သမိုင်းတွင်သွားမဲ့ အဖြစ်အပျက်နဲ့ လူတွေအားလုံး ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်မှုကို အတူတကွ ခံစားသွားစေမဲ့ နေ့ဖြစ်သွားမယ်၊ လူတွေအားလုံး လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကနေ ရပ်တန့်ပြီး ကြည့်ကြမယ်” ဟု စီအင်အင်ဌာနမှ အကြီးအကဲ တစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေးဗစ်ဘိုမင်(David Bohrman) က ပြောပါတယ်။ အမေရိကန်သတင်းဌာန အားလုံးက ၀ါရှင်တန်မှာ ပြုလုပ်မဲ့ သမ္မတကျမ်းကျိမ်ပွဲကို...
>Tint Lwin – Let’s type in Burmese on Computer
> ကွန်ပျူတာမှာ မြန်မာစာရိုက်ကြစို့ တင့်လွင် ဇန်န၀ါရီ ၁၉၊ ၂၀၀၉ ယနေ့ကာလ အင်တာနက်သုံးသူ အီးမေးလ် သုံးသူမြန်မာများ အတွက် မြန်မာဖောင့် မရိုက်တတ်ရင် ဂျီတော့ခ်နဲ့ ချက်တင် ဆက်သွယ်ရာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မိသားစုကို စာပို့လိုရာမှာ ဖြစ်ဖြစ် အခက်အခဲ ရှိပါတယ်။ မိမိက အင်္ဂလိပ်လို ရေးတတ်နေစေဦးတော့ လက်ခံမယ့် တဖက်သားက မရင်းနှီးသူ ဖြစ်နေရင် မြန်မာလိုရိုက်တတ်တာက အတော်လေး အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာပြည်နဲ့ ဂျီတော့ခ် ကနေ စကားပြောတယ်ဆိုဦးတော့ မြန်မာဘက်က လိုင်းနှေးပြီး အသံမကြားတဲ့အခါ မြန်မာလို စာရိုက်တတ်ရင် အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျီတော့ခ်မှာတော့ ဇော်ဂျီဖောင့်ကိုပဲ သုံးကြပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို ရိုက်တတ်ပြီး မြန်မာစာ မြန်မာဖောင့် မရိုက်တတ်သေးသူများအတွက် လေ့ကျင့်စရာ မြန်မာစာဖိုင်တခု...
> သက်တမ်းရှည်ပဋိပက္ခ (အပိုင်း ၅)အောင်သာငယ်ဇန်န၀ါရီ ၁၉၊ ၂၀၀၉ ဒုတိယ အင်တီဖာဒါ လှုပ်ရှားမှု (၂၀၀၀) ၂၀၀၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာ စတင်ခဲ့တဲ့ ပါလက်စတိုင်းပြည်သူလူထုရဲ့ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အုံကြွမှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ထက်ထိ ဒီအုံကြွမှုရဲ့ အကျိုးဆက်တွေကို တွေ့နေရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျူဒစ်ဇဲမ်နဲ့ အစ္စလာမ် ဘာသာတွေမှာ ဘာသာရေးအရ အရေးပါတဲ့ ဂျေရုဆလင် မြို့ဟောင်းမှာရှိတဲ့ Temple Mount ဆိုတဲ့ ဘုရားကျောင်းကို စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်မှာ အစ္စရေးအတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် အေရီယယ်လ်ရှရွန် နဲ့ လီကွတ်ပါတီက ကိုယ်စားလှယ်တချို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့တဲ့ အပေါ် အာရပ် ကမ္ဘာက မခံမရပ်နိုင် ဖြစ်ရာကနေ အုံကြွမှုတွေ ဖြစ်လာတဲ့ ဖြစ်စဉ်အပြင် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်...
> ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဓာတ်ပုံသတင်းဇန်န၀ါရီ ၁၉၊ ၂၀၀၉ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (ပင်မ) ရဲ့ အဓိပတိလမ်း အ၀င်ဝ ဆိုင်းဘုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ တက္ကသိုလ် စိန်ရတု (၁၉၉၅) က မွမ်းမံထားခဲ့တဲ့ ဒီဆိုင်းဘုတ်ဟာ အခုဆို စာလုံးများ ကွာကျမတတ်ဖြစ်နေပါပြီ။ အဓိပတိလမ်းမပေါ်မှ ပါမောက္ခတွေနေတဲ့ အိမ်တွေဖြစ်ပါတယ်။နာဂစ်ကြောင့်အမိုးတွေ ပျက်စီးနေတာ ပြန်မပြင်နိုင်ရှာသေးဘူး။ ကျောင်းသားတွေ နေထိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ အဆောင်တဆောင်ရဲ့ ပျက်စီးနေတဲ့ မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ သစ်ပင်ကြီးက ပြိုလဲပြီး၊ အမိုးတွေကလည်း ပေါက်ပြဲနေပါတယ်။ အဓိပတိလမ်းမပေါ်ကပါပဲ။ ကျောင်းသားအဆောင်တွေရှေ့က ခြံစည်းရိုး။ အဓိပတိလမ်းမဘေးက ကြေမွနေတဲ့ ပလက်ဖောင်း။ ၀ါးလုံးတိုင်နဲ့ ကျားကန်ထားရတဲ့ ခြံစည်းရိုး။ ခြံစည်းရိုးတွေရဲ့ အနီးကပ်ပုံ။ တက္ကသိုလ်များ စာကြည့်တိုက်ရှေ့က နှစ်ခုပေါင်းမှ အင်္ဂါစုံမယ့် ခုံတန်းလေးနှစ်ခုက မျက်နှာချင်းဆိုင်နေတယ်။ တခုက ကျောမှီ မရှိတော့ဘူး။...
> ဂုရုရေ … အမေရဲ့ ဘီဒိုလေးထဲမှာ မင်းတို့မောင်နှမတွေ ရှိတယ် သြရသ ဇန်န၀ါရီ ၁၉၊ ၂၀၀၉ ဂုရုရေ … မင်းဆုံးသွားပြီး ၂ လလည်တော့မှ မင်း အဖေနဲ့ အမေတို့ဆီ ရောက်ဖြစ်တယ်။ ရဲဘော်တွေ မိတ်ဆွေတွေဆိုတာ မြို့မှာရော တောမှာပါ ကျောချင်းကပ်နေကြရတော့ မနှုတ်ဆက်ဖြစ်ဘူး။ အားပေးစကား မပြောဖြစ်ဘူး။ တခါတလေ မိတ်ဆွေတွေရဲ့ သားသမီးတွေ အဖေအမေတွေ ကျဆုံးသွားတာတောင်မှ ၈ စက္ကန့်ငြိမ်ခွင့်တောင် မရတဲ့အထိ ငါတို့က ဆင်းရဲတယ်။ သားချင်းတွေကလည်း အားမာန်တွေ တင်းပြီး တိုက်ပွဲထဲ ဆက်ချီတက်ရတာပဲ။ မိဘတွေ ကိုယ်တိုင်က သားတွေ သမီးတွေအတွက် လျို့ဝှက်စွာ ၀မ်းနည်းကြ နှုတ်ဆက်ကြရတဲ့ ကာလတွေပဲ။ မင်းတို့ မောင်နှမ ၃...
>17th Anniversary of passing of U Tin Maung Win (Kha Yang)
> အင်န်အယ်ဒီ ခရမ်း ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်မောင်ဝင်း ကျဆုံးခြင်း ၁၇ နှစ် ဆွမ်းကျွေး ကျင်းပ မိုးမခ ဓာတ်ပုံသတင်း ဇန်န၀ါရီ ၁၉၊ ၂၀၀၉ လွန်ခဲ့သည့် ၁၇ နှစ်၊ ၁၉၉၁ ဇန်န၀ါရီလ ၁၈ ရက်က အင်းစိန်ထောင်ထဲတွင် ကျဆုံးခဲ့ရသည့် မတရားဖမ်းဆီးခြင်းခံရသူ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား၊ ခရမ်းမြို့နယ်ကိုယ်စားပြု အင်န်အယ်ဒီ အမတ်တဦးဖြစ်သူ ဦးတင်မောင်ဝင်း ကွယ်လွန်ခြင်း နှစ်ပတ်လည်ကို ကျန်ရစ်သူ မိသားစုများ၊ နိုင်ငံရေးနှင့် စာပေမိတ်ဆွေရင်းချာများနှင့် ကျင်းပခဲ့သည်။ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
>18th Jan 2009 – MoeMaKa Sunday Weekly Radio
> မိုးမခ ရေဒီယိုချစ်သူများ ဆစ်ဒနီ ဇန်န၀ါရီ ၁၈၊ ၂၀၀၉ သူ့စကား – ဦးတင်မိုး၊ ဦးပန်တျာ မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ သတင်းများ ပထမပိုင်း အိမ်ဝယ်လိုသူများ သတင်းစကား – Home Loan ဒါရိုက်တာဦးညွန့်ဝေ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာ ဆွေးနွေးခန်း နိုင်ငံတကာနဲ့ ပြည်မြန်မာသတင်း ဒုတိယပိုင်း ပါပါလေး ပြက်လုံးနဲ့ သီးလေးသီး အငြိမ့်တေး ၂၀၀၉ မဟာသင်္ကြန်စာ Burma Office ဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာမြင့်ချိူနှင့် မြန်မာအရေးဆွေးနွေးခန်း စီစဉ်သူများ – ဦးပန်တျာ၊ နှင်းမြတ်ခိုင် No tags for this post. Related posts No related posts.
> လှေစီး၍ နယ်မြေသစ် ရှာဖွေသူများ နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံဓာတ်ပုံသတင်းဇန်န၀ါရီ ၁၉၊ ၂၀၀၉မြန်မာ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံတို့မှ ရေလမ်းခရီးဖြင့် ရောက်လာသူများ ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း Similan ကျွန်းတွင် တွေ့ရစဉ်။ထိုင်းနိုင်ငံသည် အဆိုပါ တရားမ၀င် ၀င်ရောက်လာသူများကို ပင်လယ်တွင်းသို့ ပြန်လည် စေလွတ်ခဲ့ကြောင်း၊ ပင်လယ်ထဲတွင် အများအပြား သေဆုံးခဲ့ရကြောင်း စွပ်စွဲခံနေရသည်။ ထိုင်းအစိုးရက ဤစွပ်စွဲချက်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးရန် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များနှင့် ယနေ့ တွေ့ဆုံမည်ဟု ကြေညာထားသည်။ (photo: AFP) No tags for this post. Related posts No related posts.
> အလင်္ကာပန်းသခင် ဖန်မီးအိမ်ရှင် ဘုန်းမြတ်ကျော် ဇန်န၀ါရီ ၁၈၊ ၂၀၀၉ (၁) ၂ဝဝ၇ ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၂ ရက်နေ့၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်၊ ဒေသစံတော်ချိန် ၃နာရီ။ ယူနီယံစတေရှင် ဘူတာရုံထောင့်ထဲအဖြတ်မှာ ထိုင်ခုံကလေးတွေကို ထီးရောင်စုံမိုးထားတဲ့ နေရာလေးကို တွေ့လိုက်ရတော့ သူအတော်လေး သဘောကျသွားတယ်။ တခါမှ မရောက်ဖူးတဲ့နေရာမို့ အသစ်အဆန်းဖြစ်ရတယ်။ ဒါကြောင့် အဖော်ပါလာတဲ့ ကိုတင်မောင်မြင့်ကို ဒီဆိုင်လေးမှာ ထိုင်ဖို့ အဖော်ညှိလိုက်တယ်။ တဆက်ထဲပဲ ဆိုင်လေးဘာလေးမရှိဘူးလားလို့ မေးလိုက်တယ်။ သူ့အထာကို သဘောက်ပေါက်တဲ့ ကိုတင်မောင်မြင့်က ခေါင်းညိတ်ပြီး ထွက်သွားတော့တယ်။ မကြာပါဘူး။ လက်ထဲမှာ အငွေ့တလူလူနဲ့ ကော်ဖီတခွက်။ ရထားလက်မှတ်လည်း ဝယ်ပြီးပြီဆိုတော့ ကော်ဖီကို ခပ်သွက်သွက် သောက်လိုက်ရတယ်ပေါ့။ ရင်ထဲ နွေးသွားတယ်။ ၃နာရီ ၂ဝ ရထားထွက်မှာကြောင့်...
>Nyein Chan Thu poem 01
> ဦးချတယ်ငြိမ်းချမ်းသူ ဇန်န၀ါရီ ၁၈၊ ၂၀၀၉ ဘုရားသခင်ကညကို အရမ်းလှစေချင် တော့လ နဲ့ ကြယ်ဖွေးဖွေးကိုမွေးချလိုက်တယ် ။ ကဗျာဆရာကမြစ်ဧရာကို အလင်းရောင် ပေးချင်တော့ဖန်မီးအိမ် ကို မွေးချလိုက်တယ် ။ ငါကအလင်း နဲ့ အလှမွေးချပေးသူ ကို ဦးချတယ်။ ငြိမ်းချမ်းသူ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် ။ ဇန်နဝါရီလ။ ၁၅ ရက် No tags for this post. Related posts No related posts.
>Mar Mar Aye – 260
> ပြောပြစရာတွေလည်း တပုံကြီးရှိသေးတယ် (၂၆၀) ‘ဓနရှင်’ နဲ့ ‘အာဏာရှင်’မာမာအေးဇန်န၀ါရီ ၁၈၊ ၂၀၀၉ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင်။ မာအေးချစ်တဲ့သောတရှင်တွေ ဂီတဝါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။ သောတရှင်တို့ရေ၊ ရှေ့ အစီအစဉ်တွေမှာ ကိုယ်နိုင်သလောက် စွမ်းအားနဲ့ ကိုယ်ထားနိုင်သမျှ ထားခဲ့ချင်တဲ့ ဂီတရေး၊ စာပေယဉ်ကျေး အမျိုးသားရေးတွေကို ဆောင်ရွက်ဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့အကြောင်း ပြောမိတာ ကြားလိုက်ကြမှာပေါ့နော်။ ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်း ကိုယ့်မှန်ကင်းနဲ့ ရပ်တည်လာခဲ့တဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံကို တိုင်းတပါးက စီးပွားရေးကိစ္စ ခုတုံးလုပ် ဗန်းပြပြီး သူ့ကျွန်ဘ၀ ခါးမလှ ၀မ်းမ၀ဖြစ်အောင် တွန်းပို့ထားကြတဲ့ အချိန်တုန်းက ဂီတစာဆို ပြဇာတ် ၀ိဇ္ဇာ ဒါရိုက်တာကြီး ဒဂုန်ဆရာတင်ဟာ ပြည်သူတို့ နားဝင်အောင် သတိပြုမိနိုင်အောင်...
>Maung Swan Yi – Remembering Khin Myo Chit
> အမကြီး ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်မောင်စွမ်းရည်ဇန်န၀ါရီ ၁၇၊ ၂၀၀၉ ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်၊ လူထုဒေါ်အမာနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ဟာ ၁၉၁၅ ခုနှစ်မှာ ၁ နှစ်တည်း မွေးဖွားကြသူများ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်နဲ့ ကျနော်ဟာ အသက် ၂၀ ကျော် ကွာလို့ အမေအရွယ် ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်ကို ဒေါ်ဒေါ်ချစ်၊ အမေချစ် ဆိုတာမျိုး ခေါ်သင့်ပေမယ့် ကျနော်က အမကြီးပဲ ခေါ်လိုက်မိတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ကျနော် ငယ်စဉ်က ရှုမ၀မဂ္ဂဇင်းမှာ ဆရာသော်တာဆွေရေးတဲ့ ဟာသ၀တ္ထုတွေမှာ ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်ကို “အမကြီး” လို့ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲလေ့ရှိလို့ ကျနော်လည်း နှုတ်ကျိုးနေခဲ့ပါတယ်။ဘဘလတ်နဲ့ အမကြီးတို့ဟာ အလွန် သဘောသကာယ ကောင်းပြီး လူငယ်တွေကို ပြုစုပျိုးထောင် အားပေးချင်တဲ့ စိတ်ထား အလွန်ပြင်းပြပါတယ်။ ကမာရွတ်မှာရှိတဲ့ သူတို့အိမ်ဟာ စစ်ပြီးစ...
>Biography of Mann Win Maung, President of Burma in 1957 (Part – 5)
> မန်းဝင်းမောင် အတ္ထုပ္ပတ္တိ – အပိုင်း ၅ မှတ်စုမှတ်တမ်းဇန်န၀ါရီ ၁၇၊ ၂၀၀၉ ထိုင်းဘုရင်ကြီး ဘူမိဘောနှင့်အတူ ရွှေတိဂုံစေတီတွင် တွေ့ရသော သမ္မတမန်းဝင်းမောင် အကောက်ခွန်ဌာနမှာ ကာကွယ်ရေး အရာရှိရာထူး လစ်လပ်တော့ ပါပါ လျှောက်ပါတယ်။ သုံးလေးနေရာ လစ်လပ်ပါတယ်။ ကာကွယ်ရေး အရာရှိရာထူးဟာ ရာဖြတ်အရာရှိထက် လစာနည်းပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ လက်ထောက်မင်းကြီး (ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ)ဟာ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးဖြစ်ပြီး ရဲဝန်ထမ်းအဖွဲ့ (ပထမတန်း)မှ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ထောက်မင်းကြီး (ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ)ဟာ ပါပါ့ကို ခေါ်တော့ စစ်ဆေး မေးမြန်းပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လူမျိုး ဖြစ်တဲ့ အကောက်ခွန်မင်းကြီးဟာ ကာကွယ်ရေးအရာရှိ ခန့်တဲ့နေရာမှာ လက်ထောက်မင်းကြီး (ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ)ကို အာဏာ ပေးအပ်ထားပါတယ်။ လက်ထောက်မင်းကြီး (ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ) နှင့် ပါပါ တွေ့ဆုံ အစစ်ခံပြီး...
>Students Movement in Burma (01)
> မြန်မာနိုင်ငံကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုသမိုင်း ကိုဗဟိန်းမှသည် ကျော်ကိုကိုအထိ (အပိုင်း – ၁)အောင်ဝေးဇန်န၀ါရီ ၁၈၊ ၂၀၀၉ နိဒါန်း ကျနော် တတိယနိုင်ငံကို ထွက်ခွာဖို့ မဲဆောက်ကနေ ဘန်ကောက်ကို သွားနေတဲ့ ဘတ်စကားကြီးပေါ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ(၁၈)ရက်နေ့။ ကျနော်နဲ့အတူ ကားတစီးတည်းမှာ ဦးဇင်း ဦးပညာဝံသ၊ ကိုလှိုင်မိုးသန်း၊ ကိုလောအယ်စိုးနဲ့ မတင်မိုးလွင်တို့လည်း လိုက်ပါလာပါတယ်။ ကျနော်တို့ ခရီးစဉ်က မတ်လ (၁၉)ရက်ကို ကူးတာနဲ့ ဘန်ကောက် သုဝဏ္ဏဘူမိ လေဆိပ်သစ်ကြီးကနေ အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့ ဂျွန်အက်ဖ်ကနေဒီ လေဆိပ်ကို တိုက်ရိုက် ပျံသန်းမယ့် ခရီးစဉ်ပါ။ ညနေ (၆)နာရီခွဲပြီဆိုတော့ ကျနော် သတင်းနားထောင်ဖို့ ရေဒီယိုကလေးကို ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအခိုက်အတန့်မှာပဲ တရှိန်ထိုး ပြေးနေတဲ့ကားက ရုတ်တရက်...
> သက်တမ်းရှည်ပဋိပက္ခ (အပိုင်း ၄) အောင်သာငယ် ဇန်န၀ါရီ ၁၇၊ ၂၀၀၉ ၁၉၄၆ မှ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေ ဆုံးရှုံးမှု။ အစိမ်းရောင်မှာ ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေဖြစ်ပြီး၊ အဖြူရောင်မှာ အစ္စရေးနယ်မြေဖြစ်သည်။ လက်ဘနွန် ပဋိပက္ခ (၁၉၇၈) ဒီပြသနာရဲ့ အစကတော့ PLO ကနေ ခွဲထွက်ခဲ့တဲ့ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တခုဖြစ်တဲ့ ဖာတာ (Fatah) အဖွဲ့က အဖွဲ့ဝင် ၁၁ ယောက်ဟာ ၁၉၇၈ မတ်လ ၁၁ ရက်မှာ အမေရိကန် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည် တယောက်ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်၊ အဲဒီနောက် သူတို့ဟာ အစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့ တတိယ အကြီးဆုံး မြို့ဖြစ်တဲ့ Haifa မြို့အနီးက ကမ်းရိုးတမ်း လမ်းပေါ်မှာ ခရီးသည်တင်...
> အဲဒီတုန်းက.. ဦးနု ကြားဖြတ်အစိုးရ ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်တဦးဇန်န၀ါရီ ၁၇၊ ၂၀၀၉ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဒီမိုကရေစီအရေးလူထုအုံကြွမှုကာလက ရန်ကုန်တွင် တွေ့ရသော ဦးနု၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းတင်ဦး ရက်တွေ တရွေ့ရွေ့နဲ့ကုန်လာပြီး ရှစ်လေးလုံး ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံကြီးကလည်း ရက်ရင့်လာပြီ။ ဒေါက်တာမောင်မောင်ခေါ်ထားတဲ့ အရေးပေါ် ညီလာခံနဲ့ လွှတ်တော်တောင် ရက် နီးလာပြီ။ ကျနော်တို့မြို့မှာ အုပ်ချုပ်ရေးကို ကောင်စီက မကြီးကြပ်နိုင်။ မြို့နယ်တာဝန်ကျ ဗိုလ်မှူးကလည်း တာဝန်လွှဲယူဖို့ ဖိအားတွေ ပေးနေတော့ လုပ်ရကိုင်ရ နည်းနည်း ကြပ်တည်း ခက်ခဲလာပါတယ်။ ကြားဖြတ် အစိုးရရယ်လို့ ဖြစ်လာရင်လည်း ကြားဖြတ်အစိုးရရဲ့ ညွှန်ကြားချက် အောက်မှာ လုပ်ရင် နည်းနည်း ပိုပြီး စည်းကမ်းတကျ ဖြစ်လာမယ်။ ကြားဖြတ် အစိုးရကို...
> သက်တမ်းရှည်ပဋိပက္ခ (အပိုင်း ၃)အောင်သာငယ်ဇန်န၀ါရီ ၁၇၊ ၂၀၀၉ တတိယ အာရပ်-အစ္စရေး စစ်ပွဲ ( ၆ ရက် စစ်ပွဲ – ၁၉၆၇) ၁၉၆၄ ခုနှစ်မှာ အစ္စရေးက ဂျော်ဒန်မြစ်ရေကို သူရဲ့ နိုင်ငံတော် ရေပေးဝေရေး အစီအစဉ် အတွက် စတင် ထုတ်ယူ သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၆၅ ခုနှစ်မှာ အာရပ်နိုင်ငံတွေက စုပေါင်းပြီး Headwater Diversion Plan ခေါ်တဲ့ ရေလွှဲယူရေး စီမံကိန်း တခုကို အကောင် အထည် ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီစီမံကိန်းသာ အပြည့် အ၀ အကောင် အထည် ပေါ်ခဲ့ရင် ဆီးရီးယားပိုင် ဂိုလန်ကုန်းမြင့်မှာရှိတဲ့ Banias စမ်းချောင်းက ရေတွေ အစ္စရေးနိုင်ငံနဲ့ အစ္စရေးရဲ့...
> အမေရိကန်ပြည်အတွက် ၂၀၀၉ ကံကောင်းခြင်း လက်ဆောင် မိုးမခ ဓာတ်ပုံသတင်း ဇန်န၀ါရီ ၁၆၊ ၂၀၀၉ ယမန်နေ့က ဂျက်အင်ဂျင်စက်ထဲ ငှက်ဝင်သဖြင့် နယူးယောက် လာဂွာဒီးယားက ယူအက်စ်အဲယားဝေးလေယာဉ်ကြီး နယူးယောက်မြို့တော်ကို ဖြတ်စီးတဲ့ ဟဒ်ဆင်မြစ်ထဲကို ဆင်းခဲ့ရပါတယ်။ လေယာဉ်ဝန်ထမ်း ၅ ဦးနဲ့ ခရီးသည် ၁၅၀ လုံး ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နယူးယောက်တမြို့လုံးက လုံခြုံရေးနဲ့ ကယ်ဆယ်ရေး၊ မီးသတ် ၀န်ထမ်းအားလုံး အမြန်သွားရောက် ကယ်တင်ကြပါတယ်။ ဖယ်ရီဆိပ်က ရေယာဉ်များ၊ ပြည်သူများကလည်း ကူညီကြပါတယ်။ ၂၀၀၉ နှစ်ကူးကာလ သမ္မတသစ် မတက်မီ တပတ်အလို ကံသီတဲ့ ထူးခြားဖြစ်ရပ်ပါ။ စီတီဇင်ဂျာနယ်လစ် သဘောင်္ဖယ်ရီ စီးနေသူတဦးက အဲဒီကို သွားမကူခင်မှာ အိုင်ဖုန်းနဲ့ ရိုက်ပို့တဲ့ ပုံပါ။ (ဓာတ်ပုံ...
>Burmese Journal Digest – 15th Jan 2009
> ပြည်တွင်းက ဖတ်မိသမျှ ဂျာနယ် အပိုင်းအစ ဂျာနယ်ဂြိုလ် သာဂိ ဇန်န၀ၝရီ ၁၅၊ ၂၀၀၉ ထက်ထက်ဦးဝေ ငွေပေးမည်ဟု စည်းရုံးထားလို့ လူငယ်များက စတန့်ထွင်လမ်းလျောက်။ ၂၀၀၈ ၂၀၀၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဆန်တန်ချိန် ၁ သိန်း ခွဲ ပို့မည်။ ပျဉ်းမနားမြို့မဈေးကို ဖျက်ပြီး နေပြည်တော်တွင် ဆိုင် ၁ ခန်း သိန်း ၁၀၀ တန် ပေးရမည့် ရှော့ပင့်းမောကြီး ဆောက်မည်။ ၅ နှစ်အောက် ကလေး ၇ သန်း ကျော် ပိုလီယိုဆေး တိုက်ပေးပြီး။ ပြည့်တန်ဆာအမှုများကို မန္တလေးရဲအဖွဲ့က အရေးယူမည်၊ တိုင်ကြားပါ။ နေပြည်တော် ယာဉ်တိုက်မှုကင်းစင်မြို့တော် ဖြစ်ရမည်။ မြန်မာပြည်က မှတ်ပုံတင်ယာဉ်များတွင် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်...
> သက်တမ်းရှည်ပဋိပက္ခ (အပိုင်း ၂)အောင်သာငယ်ဇန်န၀ါရီ ၁၆၊ ၂၀၀၉ ပထမ အာရပ်-အစ္စရေးစစ်ပွဲ (၁၉၄၈) ဒီစစ်ပွဲဟာ အာရပ်ပြည်နဲ့ ဂျူးပြည် ၂ ခု အတူတွဲ ရှိရမယ် ဆိုတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ကြီးက အတည်ပြု လိုက်တဲ့ အထွေထွေ ညီလာခံ ဆုံးဖြတ်ချက် အမှတ်(၁၈၁) ကို အာရပ်ကမ္ဘာက ငြင်းပယ်ခဲ့တာကနေ စတင်ခဲ့တာပါပဲ။ ဒီအခါမှာ အစ္စရေး ၀န်ကြီးချုပ် ဒေးဗစ်ဘန်ဂူရီယမ်က အစ္စရေးနိုင်ငံဟာ ကိုယ့်ကြမ္မာ ကိုယ် ဖန်တီးခွင့် ရှိတဲ့ လွတ်လပ်သော အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင် နိုင်ငံ ဖြစ်ကြောင်း မေလ ၁၄ ရက်မှာ ကြေညာပြီး တုန့်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနောက်မှာတော့ အာရပ်နိုင်ငံတွေက အစ္စရေးကို စတင် ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက်ရာကနေ...
Page 844 of 908«1...842843844845846...908»